Inani elandayo labantu abashadile eminyakeni yamuva, bedinga basiza ubuchwepheshe zokuzala. Kuze emashumini ambalwa eminyaka edlule ebukhoneni ezinye zezinkinga amadoda nabesifazane wayelokhu engenabantwana. Manje imithi okhula ngokushesha kakhulu. Ngakho uma ungakwazi ukuthola ukhulelwe isikhathi eside, kufanele usebenzise indlela ezifana insemination. Ubani zaphumela okokuqala, bakutshele okufakiwe isihloko. Uzofunda mayelana nenqubo kanye indlela ukusetshenziswa kwaso, kanye bakwazi bajwayelane iziguli sibuyekezwe, lidlule kulesi sigaba.
Wasiza ubuchwepheshe zokuzala: insemination intrauterine
insemination Artificial - inqubo yokuphathwa emzimbeni yowesifazane wabantwana ingane esindayo lesidoda umlingani wakhe. Okwamanje - into kuphela lokho kwenzeka akunikezi inani langempela. Ngemva kwalokho, zonke izinqubo abazenzi ngendlela engokwemvelo.
Insemination esiyolandelwa isidoda somyeni wakhe noma abanikelayo. Material esithathwayo fresh noma eqandisiwe. imithi yesimanje kanye nakho kufanele uvumele odokotela ambalwa okukhulelwa ingane, ngisho nasezimweni esasibonakala njengomnyama ongenafu.
Inqubo insemination kuboniswa imibhangqwana abakwazi okukhulelwa ingane ethile kwaze kwaphela unyaka, kanti bobabili abalingani abanalo pathologies. Ngokuvamile, icala elinjengaleli sikhulume ukungabi nenzalo simbe. Libuye ubufakazi insemination kuyoba isimo esinjalo:
ukunqabela ngekhwalithi sperm isidoda motility ngabantu;
okungajwayelekile ngokuphila ngokocansi noma nezinkinga zobulili;
wesibeletho isici ukungazali (isidoda amaseli ukuthuthukiswa wesibeletho canal umlingani);
khona nendaba yokukhula (kokubili abesilisa nabesifazane);
izici yokwakheka isakhiwo kwezitho zobulili;
ukungabi nakwenzeka kwento ubuhlobo bobulili ngaphandle inzalo (uma ukutheleleka nge-HIV kwabesifazane);
isifiso okukhulelwa ingane ngaphandle komyeni, nokunye.
Artificial insemination ngokuvamile eyenziwa emitholampilo yangasese ezihilelekile ekuzaleni ubuchwepheshe zokuzala. Inqubo kudinga ukuqeqeshwa okuthile futhi has izigaba eziningana. Ake sihlole kubo.
insemination Artificial kuhilela uphethwe kwabo bobabili abashadile. Indoda ngempela kufanele kudlule ukuhlaziywa isidoda, ukuze ochwepheshe kungaba ngokuhlakanipha bahlole isimo isidoda. Uma imiphumela abanelisi zokukhwabanisa eminye izosetshenziswa ngesikhathi sale nqubo. Futhi umlingani uphenywa ngokuba khona izifo ezidluliselwa ngocansi, kuthatha ukuhlolwa igazi nasesifubeni X-ray.
Abesifazane Ziningi uphethwe kuka ezingabantu. Isiguli sihamba ultrasound ukuhlola, izandla phezu cwaningo ekutholweni zokuzala ipheshana izifo, inikeza fluorography. hormone Futhi, umama okhulelwe kufanele uphenyo, ukucacisa esiqiwini ovular. Kuye imiphumela eyatholakala futhi eminye akhethiwe umsebenzi qhinga pair.
esigabeni sokuqala: ukushukuma nobe umjikelezo wemvelo?
Ngaphambi insemination abanye abesifazane kuyabekwa i-hormone izidakamizwa. Ukuthatha kubo kudingeka ngokuqinile setha umthamo.
Dokotela libhekisela izinsuku lapho umuthi injected. Kungenzeka ngesimo amaphilisi noma umjovo. ukushukuma kwama-hormone ezikhiqiza amaqanda kudingeka abesifazane nge-ovulation iziyaluyalu kanye nalabo ezigulini eziye encishisiwe reserve wesibeletho. Ukunciphisa inani amaqanda kungaba umuntu isici noma umphumela resections amaqanda. Futhi encishisiwe reserve wesibeletho is ebonwe besifazane besondela iminyaka engu-40.
Njenganoma ukushukuma, futhi umjikelezo wemvelo, isiguli inikezwa follikulometriya. Female ovame ukuvakashela professional uphethwe ultrasonic okuyinto wenza metering follicle. Nakani isimo endometrium. Uma ungqimba lwamafinyila ikhula kahle, isiguli waqokwa imithi eyengeziwe.
Uma kunqunywa ukuthi follicle ifinyelele Ubukhulu ezifanele, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba athathe isinyathelo. Kuye lapho insemination nge-ovulation ezinqunyiwe izinsuku ezimbalwa noma amahora ambalwa. Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde isimo isidoda. Uma usebenzisa izinto fresh, yethula akakwazi zenzeka izikhathi ezingaphezu kwesisodwa zonke izinsuku 3-5. Ngakho-ke, abantu ababili ahlinzekwa ezimbili okufanele akhethe kuzo:
Insemination izinsuku 3 ngaphambi ukukhiqizwa kwamaqanda futhi emuva kwamahora ambalwa kusanda wakhe;
esasikhipha kanye impahla ngqo ngesikhathi ukudabuka follicle.
Yini indlela engcono futhi ngamandla, ke ingakamiswa kunqunywa. Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde impilo sabalingani kanye nobufakazi ku ngalo insemination wenziwa. Ubani zaphumela okokuqala kuhulumeni eyodwa, hhayi emkhandlwini enquma kwi double. Futhi okuphambene nalokho. Isimo siba esihlukile ne isidoda eqandisiwe noma impahla abanikelayo.
Insemination nge donor njalo ihlinzeka kwangaphambilini okokuqandisa impahla. isidoda ezinjalo ngemva incibilikiswa, Ungaqala izingxenyana eziningana. Ukuphumelela le ndlela Kuthi ephakeme ukwedlula kokukhulelwa impahla fresh.
Misa isidoda ikani kanye partner umbhangqwana oshadile. Akubalulekile ukunikela. Xoxa udaba isidingo yokuzalana. Phakathi cryopreservation isidoda kuthuthukisa izinga layo, ukhetha okungcono, isidoda okusheshayo futhi unempilo kuphela. amaseli sokugembula isuswa impahla. Umphumela etholwe aphethe a CONCENTRATE okuthiwa.
Inqubo ye Isingeniso impahla
Le nqubo ithatha akukho ngaphezu kwesigamu sehora. Owesifazane esitulweni izifo zabesifazane esimweni ajwayelekile. Ngo wesibeletho ngokusebenzisa sangasese ipayipi mncane yethulwa. Ngakolunye uhlangothi tube eqondiswa ne isipetu ababebuthene impahla. umjovo kokuqukethwe ilethwa esibelethweni. I ipayipi isuswe kanye nesineke Kunconywa ukuba alale emaminithi la-15.
Ngosuku insemination, owesifazane kwenqatshelwe ubunzima nokuphakamisa izinto ezisindayo. iholide ezinconyiwe. azikho imikhawulo imodi ngoba usuku olulandelayo. Nokho, elikhuluma ngesidingo sokugcina sinemikhuba emihle yenhlanzeko, kusukela emva insemination, kukhona ingozi ngokujoyina ukutheleleka.
Ezinsukwini zokuqala nesesibili impahla ukudlulisa, abesifazane bangase babe edonsa ubuhlungu esiswini ephansi. Odokotela musa ukweluleka ukuphuza imithi. Uma ubuhlungu kubonakala babulawa kuwe, khona-ke kudingeka ukuba afune usizo lwezokwelapha. Futhi, ezinye iziguli kungenzeka ukubeka amabala okuncane. Basuke elixhumene isandiso elincane umsele wesibeletho kanye nokwenzeka traumatizing le mucosa. Uketshezi siqu futhi asidingi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezengeziwe.
Ngemva insemination kwenziwe, ukukhulelwa kumele kwenzeke ngaphakathi kwamahora ambalwa. Emva kwalesi sikhathi, iqanda kuba ehlatshwa. Kodwa ngalesi sikhathi, owesifazane basalokhu bengakakwazi ukuthola ngesikhundla sakhe esisha. Ezinye iziguli ukwesekwa kwama-hormone inikezwa. Izidakamizwa bayadingeka umjikelezo we ukushukuma futhi ngezinye izikhathi yemvelo njalo.
Test emva insemination ukubonisa Chile lesifanele emva kwezinsuku 10-14. Uma owesifazane eba eyenziwa ukushukuma futhi imijovo human chorionic gonadotropin, isivivinyo uthambekele kokuhle, kungabonwa ngokushesha ngemva kokuhlinzwa. Nokho, alikhulumi ekubeni ukhulelwe. Reagent strip sibonisa kuphela khona hCG emzimbeni.
uqinisekise Iningi ngokunembile noma wenqabe ultrasound sokukhulelwa uyakwazi. Kodwa lokhu kungase ngeke lube ngaphambi 3-4 amasonto ngemva kokuhlinzwa. Amanye amadivayisi yesimanje akuvumela ukuba uthole imiphumela 2 amaviki.
Insemination: okwacaca okokuqala?
Kukhona imibhangqwana wesibalo owenza zokukhwabanisa enjalo. Amathuba sokukhulelwa zokhahlamba kusuka 2 amaphesenti angu-30. Nakuba esikhathini umjikelezo zemvelo, ngaphandle zokusiza ekuzaleni e owakwakhe enempilo kuba 60%.
I umphumela omuhle we-try kuqala ngokuvamile ngaphansi kwale mibandela elandelayo:
engu-bobabili abalingani ungaphakathi uhla kusuka 20 kuya eminyakeni engu-30;
owesifazane ayinakho iziyaluyalu hormone;
umlando amadoda nabesifazane akudingeki zokuzala ipheshana izifo;
Ozakwethu ahole indlela yokuphila enempilo futhi uthanda umsoco ofanele;
ubude yokuzama akuphumelelanga okukhulelwa ingane esingaphansi kweminyaka emihlanu;
okwenzile ngokudlule ukushukuma wesibeletho nokuhlinzwa izifo zabesifazane.
Naphezu kwalezi zimo ezinhle ongakhetha, impumelelo kungaba kwezinye izimo.
Cishe zonke iziguli ngaphambi ukufunda manipulation ukubuyekezwa, esesikhundleni insemination: okwacaca okokuqala, ukuthi baziphathe kanjani, yini kangcono ukwenza, nokuthi kubalulekile ukuba afeze ingqondo. Kufanele wathi ngesikhathi esisodwa ukuthi uma abakulindele lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle, bese kudingeka nje ulalele udokotela. Ayikho nezintombi iseluleko ngeke kusize. isimo ngamunye ngamunye. Ngakho-ke, lapho insemination ikhethwa Yiqiniso yayo isinyathelo esimweni ngasinye.
I ubulili bubuhle ababenolwazi isici wesibeletho ezimweni eziningi uthole umphumela omuhle zokukhwabanisa. Isidoda amaseli ukundlula umsele wesibeletho kungukuthi libhujiswa emizimbeni anti-spermatozoa. Uma sikhuluma ikhwalithi embi isidoda ke bonke ngamunye. Ikakhulu uhlelo zokuzala angathuthukisa impahla. Kepha akusimina kodwa unike isiqinisekiso okuthembekile lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle. Inqubo mayelana 30 amaphesenti umusi ziyaneliswa.
Nzima kunjalo kwenzeka ukuthi kukhona zokugula kwabesifazane. Zingase zibekwe izifo ezifana endometriosis, fibroids, ama-polyp esibelethweni kanye ukuvuvukala. Ezimweni ezinjalo, amathuba okuba umphumela ube muhle esingaphansi ngisho kwaleso. Cishe 8-10 ngazimbili eziyikhulu ayakhulelwa.
Odokotela bavame ukweluleka ukuchitha akukho kuka 3-4 imizamo. Uma ngamunye wabo eyenziwa ukushukuma, kufanele ucabange mayelana namasu eziyinkimbinkimbi ezisiza ubuchwepheshe zokuzala - IVF. Kuleso simo, uma owesifazane ivumela ngobudala hormone ungekho emjikelezweni IUI, ngokuphinda zokukhwabanisa kungaba esingenamkhawulo izikhathi.
insemination Artificial kungaba kwenziwe emitholampilo yangasese ngemali engambi eqolo. Kodwa kuxhomeke kakhulu isimo sezempilo abalingani. I pathologies abathole, lo nzima kangakanani ukulungiselela. Lapho isidoda zangaphambi eqandisiwe kwandisa izindleko inqubo, njengoba kwaba njalo endabeni ka-isitoreji yesikhathi eside.
Uma ukusayinda insemination evamile, intengo yayo kuyoba ababecishe babe izinkulungwane 10-20 ruble. Kulokhu, izindleko kakade ingase ihlanganise iseluleko isazi, ukuhlaziywa, kanye nokuqapha follikulometriya ukuqinisekisa sokukhulelwa. Okunye imitholampilo ukunikela inkokhelo eseceleni wesevisi ngayinye, ukunciphisa izindleko zokukhwabanisa. Yini ukukhetha, kuphuma kuwe.
insemination Artificial, lapho intengo iphansana eqhathaniswa indlela ngaphandle kwesibeletho fertilization, enikele ithemba elisha imibhangqwana kanye ithuba lokukhulelwa ingane. Kude akuzona zonke unkosikazi ungenza IVF yedwa, quota abelwe kuphela izinkomba ezithile. Lapho insemination konke kulula kakhulu.
Uma ungeke ukwazi okukhulelwa ngaphezu konyaka owodwa wokuphila ngokocansi njalo noma ube nezinye izinkomba ukuze insemination, uthintane onguchwepheshe. Lapho efeza manipulation akukho okufanele ukhathazeke ngakho. Zonke izinqubo engeyona engokwemvelo. Lokuzaliswa ukusiza kuphela ukwandisa amathuba okuba umphumela ube yimpumelelo. Wena imiphumela emihle!
Izinhlumba Endocervical ku wesibeletho: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
I-hormone estradiol: izinga kwabesifazane. Estradiol: ngesilinganiso sokukhulelwa
Baphi izintuthwane enamaphiko
Ukulungiswa kwe-SDA: ukubuyekezwa, indalo kanye nesicelo.
Indlela yokwenza Injengesithusamagwababa ngezandla zakhe: isebenziseka ngezindlela eziningi, ngenxa yobuhle nokusikwa komkhiqizo wangempela
I-M56 "Scorpion": Ukubukezwa kanye nokubuyekeza abadlala
Indlela yokwenza unodoli ifenisha aphume ibhokisi likamentshisi futhi amakhadibhodi
Mahhala Amasayithi Ezihlukaniswa I Marketing Web.
Ukupheka: indlela ukupheka izinkalankala?
Isibonelelo somntwana wesibili
Kufanele ingane ukulala kangakanani e izinyanga 4 - izibalo ezomile futhi amaqiniso okuphila
Cradle "Simplisiti": Uhlolojikelele, tinkhulumo, izici kanye nokubuyekeza